एन्ड्रोइड वान फोन, माघको पहिलो साता नेपालमा उपलब्ध हुने
Aakar January 02, 2015
तपाईले गुगलको होमपेज याद गर्नुभएको छ? गुगलले केही दिन देखि आफ्नो होमपेजमा सर्चबक्सको तलपट्टि 'एन्ड्रोइड वान' को विज्ञापन (Introducing Android One. A new kind of smartphone) राखेकोछ । विज्ञापनमा राखिएको लिंक क्लिक गर्नुभयो भने, तपाई एन्ड्रोइड वानको नेपाल पेजमा पुग्नुहुन्छ ।
गुगलले सार्वजनिक रुपमा नेपालमा एन्ड्रोइड वान कहिले उपलब्ध हुन्छ नभनेपनि, विज्ञापन मार्फत जनवरी दोस्रो साता (माघ पहिलो साता) भित्रै उपलब्ध हुने संकेत दिएकोछ । बाहिर १०० डलर भनेर चर्चा गरिएको फोनको नेपाली मूल्य निर्धारण गरिएको छैन, तर इन्टरनेटमा चलेको हल्ला अनुसार एन्ड्रोइड वान फोन ५ देखि १० हजार नेपाली रुपैयाँमा नेपाली बजारमा उपलब्ध हुनेछ ।
त्यसो त नेपालमा एन्ड्रोइड वान भन्दा कम मुल्यमा विभिन्न ब्रान्डका एन्ड्रोइड फोनहरु पहिले नै उपलब्धछन् । तर अपरेटिङ सिस्टम, डिजाइन अनि हार्डवेयरका कारण ती सेटहरु भन्दा गुगलको एन्ड्रोइड वान उत्कृष्ट भएका कारण, धेरैको रोजाइ हुनजानेछ । एन्ड्रोइड किटक्याट अपरेटिङ सिस्टम सहित नेपाली बजार छिर्ने योजनामा रहेको एन्ड्रोइड वानले, तुरुन्तै एन्ड्रोइडको ललिपप अपडेट पाउनेछ, यसका साथै कम्तिमा दुई वर्षसम्म गुगलबाट निरन्तर नयाँ अपडेटहरु पाउनेछ । कम मूल्यमै अन्य नयाँ महंगा स्मार्टफोनहरु बराबरको सुविधा एन्ड्रोइड वानमा प्राप्त हुनेछ । गुगलको सहभागितामा माइक्रोम्याक्स, कार्बन र स्पाइस आदिले निर्माण गरेका सेटहरु नेपालमा विक्रिवितरण हुनेछ।
दक्षिण एसियाली देशका प्रयोगकर्ताहरुलाई लक्षित गरेर, गुगलले सस्तो र राम्रो स्मार्टफोन 'एन्ड्रोइड वान' को अवधारणा ल्याएको हो। भारतमा सेप्टेम्बर देखि बिक्रि वितरण सुरु भएको एन्ड्रोइड वान फोन, नेपाल, बंगलादेश र श्रीलंकामा निकट भविष्यमा नै उपलब्ध हुनेकुरा गुगलले आफ्नो ब्लगमा डिसेम्बरमै घोषणा गरेकोथियो। नेपालमा करिब ३० लाख स्मार्टफोन प्रयोगकर्ताहरु रहेको अनुमान छ ।
तस्विर: एन्ड्रोइड वान